Zonke ii-Chromebook ezikhutshwe kulo nyaka ziya kuba nakho ukufikelela kuGoogle Play | Iindaba zeGajethi
Zonke ii-Chromebook ezikhutshwe kulo nyaka ziya kuba nokufikelela kuGoogle Play
Kwinkomfa yokugqibela yonjiniyela kaGoogle kunyaka ophelileyo, abafana abavela kwiNtaba yokujonga babhengeza ukuba baya kuyenza Ukukwazi ukufaka usetyenziso lwe-Android kwezinye iiChannelbook ezazisele zifumaneka kwintengiso kunye nezo zaziza kufika phambi kokuphela konyaka. Kancinci kancinci kuye kwabakho abasebenzisi abaninzi abonwabela olu khetho lutsha oluvumela ukwandisa kakhulu i-ecosystem yezicelo zeelaptops ezisetyenziswa kakhulu nguGoogle, izixhobo ezibonakaliswa ngokufuna uqhagamshelo lweintanethi kuyo yonke into, ngakumbi ukugcina amaxwebhu.
Okwangoku iimodeli esele zihambelana nolu khetho yiChannelbook R11, iUSUS Chromebook Flip kunye neChannelbook Pixel 2015. Kodwa ukubona impumelelo kolu hlobo lwesixhobo, ngakumbi ezikolweni, abavelisi bayaqhubeka ukubheja kolu hlobo lwesixhobo kwaye zonke iimodeli ezifika kwimarike kulo nyaka ziya kunika ithuba lokuba ukwazi ukufaka usetyenziso ngokuthe ngqo kwiVenkile yeGoogle Play.
Gcina ukhumbula ukuba ukuze ufake olu hlobo lwesicelo, kunyanzelekile ukuhlangabezana noluhlu lweemfuno ezibekwe nguGoogle. Ukongeza, abaphuhlisi abafuna ukuthatha inxaxheba kulo msinga wengeniso unikezelwa yiChannelbook kuye kwafuneka ukuba bahlengahlengise usetyenziso lwabo ukutshintsha unxibelelwano lwezicelo zabo, ukusuka kwindlela yokuchukumisa ukuya kwenye eyenziweyo kusetyenziswa ikhibhodi, ukuze kungabikho zonke usetyenziso zinokusetyenziswa kwiiChannelbook.
EUnited States, I-ChromeOS yinkqubo yesibini yokusebenza esetyenziswa kakhulu, ngaphambili kwe-macOS kunye ne-iOS, inkqubo yokusebenza eyayisele isetyenziswa kakhulu ezikolweni, kodwa okoko kwafika iChannelOS ibisitya umhlaba ukuyenza inyamalale. Unobangela ophambili ukongeza ekunikezeleni ngebhodi yezitshixo edityanisiweyo kukuba kubiza kakhulu kune-iPad, ekufuneka uthenge kuyo ikhibhodi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » Zonke ii-Chromebook ezikhutshwe kulo nyaka ziya kuba nokufikelela kuGoogle Play
Umfanekiso we-LG G6 ucociwe ngaphambi kokumiliselwa kwawo ngoFebruwari 26
UAsus usungula iBhodi yeTinker, olwa ngqo neRaspberry Pi